Sina 5 sosona A2 fanapahana mat, 661A2, fanasitranana tena famonoana tsihy fanamboarana sy ny orinasa | Allwin
5 sosona A2 fanapahana tsihy, 661A2, fanasitranana tena tsihy fanapahana
Sfanasitranana elf A2 orinasa fametahana mat mivantana
Matetika manasitrana tena, arovy ny faran'ny latabatra fiasanao, malefaka ny fipetraky ny tsihy, aza mandratra ny valaham-pandrefesana, mateza kokoa ny lelanao. Azonao atao ny mampiasa an'io tsihy io ho toy ny mpiaro amin'ny birao na ny biriky fanapahana DIY ao amin'ny efitranonao, trano, sekoly na birao.
Fanapahana roa heny amin'ny lafiny roa, ny refy sy ny refy ary ny zoro. Haben'ny masony: 24.8 x 18.5inches, habe amin'ny grid: 24 x 18inches, hatevin'ny 3MM, zoro samihafa 30 ° 45 ° sy 90 °, Mazava ny fanontana ny tsipika, manampy amin'ny fanaovana zoro tsipika.
Fanomezana tonga lafatra ho an'ny mpanao asa tanana sy ny fialamboly! Varotra mivantana mivantana an'ny orinasa matihanina, kalitao ary vidiny lafo. Natolotra ho an'ny mpanakanto, mpanao asa tanana, mpanao trano, quilter, mpanao sokitra ary fialam-boly.
Item Model Model 661A2
Item lanja 1.35kg isaky ny sombiny
Vokatry ny vokatra 23,62 x 17,72 x 0,12 santimetatra / 60 x 45 x 0,3 cm
Previous: 5 sosona A1 fanapahana tsihy, 661A1, fanasitranana tena tsihy fanapahana
Manaraka: 5 sosona A3 manapaka Mat, 661A3, Matetika manapaka tena
5 sosona A4 manapaka Mat, 661A4, Manasitrana tena Cu ...
3 sosona 3 manapaka Mat, 883A3, Manasitrana tena ...